ब लात्कारपछि पूर्वसचिव कार्की प त्नीको ह त्या! « Dhankuta Khabar
ब लात्कारपछि पूर्वसचिव कार्की प त्नीको ह त्या!
काठमाडौं, माघ २८ । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती ४९ वर्षीया मुना कार्कीको घरमा काम गर्न राखिएका सहयोगीबाट घरभित्रै ह त्या भएको छ।
१२ वर्षदेखि घरेलु कामदार बसेका दाङ लमहीका विजय चौधरीले कार्कीको ह त्या गरेको प्रहरीले पु ष्टि गरेको छ । २२ वर्षीय चौधरी पनि सँगै मृ त भेटिएका छन् ।
सानेपास्थित कार्की निवासको डाइनिङ हलमा सोमबार बिहान दुवैको श व भेटिएको हो । कार्कीको श व टाउकोमा ग म्भीर चो ट लागेको र अनुहार कपालले छोपिएको अवस्थामा थियो ।
चौधरीको घाँ टीमा पा सो लागेको र डो री चुँ डिएको अवस्थामा थियो । आधा डोरी उनी ढलेको ठीक माथि भर्याङको रेलिङमा झु न्डिएको थियो ।
अ नुसन्धानमा संलग्न अ पराध अ नुसन्धान महाशाखाका एसपी मुकेशकुमार सिंहले कार्कीको ह त्या चौधरीले नै गरेको पु ष्टि भएको बताए ।
‘हामीले सिसिक्यामेरा फुटेज अध्ययन गयौँ । फुटेज अध्ययन गर्दा कार्कीको ह त्या चौधरीले नै गरेको देखिन्छ, क न्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ एसपी सिंहले भने, ‘तर, घ टनाको कारण बु झ्न सकिएको छैन । हामी अध्ययन गर्दै छौँ।’
सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले आर्थिक, यौ न, ला गुऔ षध र म नोवैज्ञानिक कारण घरेलु कामदारबाटै ह त्याका घटना हुने गरेको बताए ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेको समाचार अनुसार कार्कीको ब लात्कारपछि ह त्या भएको हुन सक्ने आशं का प्रहरीले गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार घ टनास्थल मुचुल्काका क्रममा चौधरीको अ न्डरवेयरभित्र वी र्यजस्तै देखिने चि प्लो पदार्थ भेटिएको छ । अ न्डरवेयरको केही भागमा र गत लागेको पनि देखिएको छ । मृ तक कार्कीको मा सिक च क्रकै वेला रहेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘चौधरीको अ न्डरवेयरमा शं कास्पद वस्तु फेला परेका छन् । तर, परीक्षण हुन सकेको छैन,’ महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सिंहले भने, ‘झु न्डिएको मान्छेको शरीरको कुनै अंगबाट तरल पदार्थ निस्किनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ । त्यसैले थप अनुसन्धान आवश्यक छ।’
के हो से क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ख रिद प्र करण ?
काठमाडाैं,फागुन ९ । २०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० लाखकी पर्यटन प री
काठमाडाैं,फागुन ९ । कालो सारीमा रातो पारी (किनारा), सेतो पछ्यौरीमा रातो पारी ।
सञ्चार मन्त्रालयमा अ ख्तियारको छा पा, आ रोप पु ष्टी भए बाँस्कोटालाई आठ वर्षसम्म कै द हुनसक्ने
काठमाडौं, फागुन ९ । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा बिहीबार
यी हुन् प्रदेश १ का एक पटक घु म्नैपर्ने प र्यटकीय स्थलहरू
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलबारे धेरैलाई थाहा नहुन
के हो से क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ख रिद प्र करण…
सञ्चार मन्त्रालयमा अ ख्तियारको छा पा, आ रोप पु ष्टी…
यी हुन् प्रदेश १ का एक पटक घु म्नैपर्ने प…
ओलीका वि श्वासपात्रको ब हिर्गमन